‘हामीले शिक्षालाई उचाइमा पुर्‍याएका छौँ’ – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
२०७६ फाल्गुन १०, शनिबार ११:२५ गते
भरतपुर–२, आँपटारीस्थित स्मल हेभन मोडल स्कुलले शनिबार १४औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस मनाउँदै छ । विसं २०६२ सालमा स्थापना भएको स्कुलले गत वर्षदेखि कक्षा ११ र १२ को पढाइ पनि सुरू गरेको छ । स्कुलको प्रिन्सिपलमा भरतपुर–११ निवासी विमलकुमार क्षेत्री रहेका छन् । विसं २०६८ सालदेखि क्षेत्री स्कुलसँग आबद्ध छन् । स्कुल स्थापनापछि विभिन्न आरोह–अवरोह आए पनि स्कुलले थुप्रै उपलब्धिहरु हासिल गरेको छ । यही विषयमा स्कुलका प्रिन्सिपल क्षेत्रीसँग चितवन पोष्ट दैनिकले संक्षिप्त कुराकानी गरेको छ :
१) स्कुलको १४औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा हालसम्म आएका उतारचढावलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
— स्कुल स्थापना हुँदाखेरि यसको नाम भेनस इङ्लिस स्कुल थियो । भरतपुर–२ का वडाध्यक्ष तथा स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष पूर्णबहादुर श्रेष्ठको पहलमा स्कुल सञ्चालनको सुरूवात भएको थियो । सुरूवाती चरणमा आँपटारीको डाँडामा कक्षा ५ सम्म पढाइ सुरू भयो । २०६६ सालमा यसलाई चितवन मोडल स्कुलको नाममा रुपान्तरण गरियो । २०६८ सालमा आएर आँपटारीकै स्मल हेभन र चितवन मोडल स्कुल समायोजन भएर स्मल हेभन मोडल स्कुलको नाममा सञ्चालन भयो । त्यति नै बेलादेखि विद्यार्थीहरुले कक्षा १० को एसएलसी परीक्षा दिन पाए ।
२) स्मल हेभन मोडल स्कुलले शिक्षामा कस्तो योगदान पुर्‍याएको छ ?
— एसएलसीको पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरुले नै परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याएर शिक्षाको मह¤वलाई उचाइमा पु¥याउन सफल भयौँ । त्यतिबेला स्वेसा श्रेष्ठले ९०.३८ प्रतिशत ल्याएर छात्रातर्फ जिल्ला प्रथम भएकी थिइन् । उनले अहिले एमबिबिएस सकेकी छन् । यसको मतलब विद्यार्थीहरुले जिल्लामा राम्रो नतिजा ल्याइरहेका छन् भने उनीहरुको करिअर अब सुरू हुँदैछ । २०७५ सालको एसइई परीक्षामा पनि तीन जना विद्यार्थीले उत्कृष्ट जिपिए ल्याएका छन् । उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल भएकोमा हाम्रा शिक्षकहरु पनि विभिन्न समयमा सम्मानित हुँदै आउनुभएको छ ।
३) शैक्षिक गुणस्तरलाई अझ सुधार गर्न स्कुलले कसरी अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ?
— हामीले कक्षाकोठाभित्र र बाहिरको पढाइ तथा सिकाइमा प्राथमिकता दिएका छौँ । कक्षाकोठालाई कसरी सुविधासम्पन्न बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ । डेस्क, बेन्चहरु आरामदायी हुनुप¥यो भनेर फर्निचरको व्यवस्था राम्रो गरेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकामा पनि एउटा विद्यार्थीका लागि एक वर्गमिटरको ठाउँ खाली हुनुपर्ने तोकिएको छ । त्यसअनुसार नै हामीले विद्यार्थीलाई स्पेस प्रदान गरेका छौँ । कक्षा ९ देखि माथि पढाइ हुने कक्षाकोठामा प्रोजेक्टर राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाउँदै आएका छौँ ।
त्यस्तै, कक्षाकोठाबाहिरको कुरा गर्दा हामीसँग कम्प्युटर ल्याब, विज्ञान प्रयोगशाला पर्याप्त छ । खेलकुद मैदानको राम्रो व्यवस्था छ, साथै अपडेटेड लाइब्रेरी छ । हामीले मल्टिमिडिया कक्षा पनि बनाएका छौँ, जहाँ विद्यार्थीहरुलाई पढाउने र सिकाउने काम हुन्छ । कक्षा ३ भन्दामाथिका विद्यार्थीहरुलाई वर्षमा दुईपटकसम्म शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, जसद्वारा जिल्लाभित्रका धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मह¤वको ज्ञान हुन्छ । हामीसँग चित्रकला, नृत्य र संगीतको शिक्षक नै राखेर क्लब नै निर्माण गरेका छौँ । विद्यार्थीहरुले त्यही क्लबमार्फत चित्रकला, नृत्य र संगीत सिक्नुहुन्छ । विद्यार्थीहरुले पढाइसँगै छुट्टै कला पनि सिकेर जाऊन् भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
४) कुन–कुन ठाउँबाट विद्यार्थीहरु आउने गरेका छन् ?
— सबैभन्दा बढी आँपटारीकै विद्यार्थी छन् । यसका साथै भरतपुर–११ को बसेनी, भोजाडसम्म र रामनगरका विद्यार्थीहरु पनि यहाँ आउँछन् । देवघाटबाटमात्रै ४० जना आउँछन् । बाह्रघरे, बेलचोक र मालपोतचोकसम्मका विद्यार्थीहरु हामीसँग छन् ।
५) स्कुलमा मध्यम वर्गका विद्यार्थीले पनि पैसा तिरेर पढ्न सक्ने वातावरण छ कि छैन ?
— निजी शैक्षिक संस्थाहरु शुल्क लिएरै चल्ने हुन्, यसमा राज्यको कुनै सहयोग रहँदैन । तर, हामीले वैज्ञानिक तरिकाले शुल्क निर्धारण गरेर विद्यार्थीसँग लिइरहेका छौँ । शिक्षा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार हामीले विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिरहेका छौँ । वरिपरिका टोल सुधार समिति र सामाजिक संस्थाको सिफारिसमा पनि थप छात्रवृत्ति दिने गरेका छौँ । हाम्रो स्कुलमा मानवसेवा आश्रमका तीन जना बाबुनानीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिएर निःशुल्क पढाएका छौँ । देवघाटका पनि केही विद्यार्थी छन् । विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा हामीले १२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर उनीहरु पढिरहेका छन् । उनीहरुको शिक्षा पनि राम्रो छ ।
६) विद्यार्थीहरुले पढ्ने भौतिक संरचनाहरु कस्ता छन् ?
— हामीसँग दुईथरीको सुविधासम्पन्न भौतिक पूर्वाधार छ । एउटा चारतले भवन छ, त्यसमा २८ वटा कक्षा छन् । भवनमा कक्षा ६ देखि १२ सम्मको पढाइ हुन्छ । नर्सरीदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरु जस्ताले छाएको भवनमा पढ्छन् । साना विद्यार्थीहरुका लागि बालमैत्री भवन छन् । जस्तामुनि जिप्सन लगाइएको छ, जसका कारण तल तातो आउन पाउँदैन । संगीत र नृत्यका लागि छुट्टै भवन बनाएका छौँ । चमेना गृहमा एकैचोटि पाँच सय विद्यार्थी बसेर खान सक्छन् । यातायातका साधनमा पाँचवटा बस छ ।
७) ‘प्लस टु’ तर्फको पहिलो ब्याचबाट कस्तो अपेक्षा लिनुभएको छ ?
— कक्षा ११ को पहिलो ब्याचका विद्यार्थीहरु राम्रो अंकका साथ उत्तीर्ण भएका छन् । कसैले पनि दोहो¥याएर परीक्षा दिन पर्दैन । अबको कक्षा १२ को परीक्षामा पनि विद्यार्थीहरुले राम्रो तयारी गरिरहेका छन् । शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको मेहनतअनुसार विद्यार्थीहरुले उत्कृष्ट अंक ल्याएको हामीले ठहर गरेका छौँ । कक्षा ११ मा ३३ जना र कक्षा १२ मा ३८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । ‘प्लस टु’ तर्फ विज्ञान र व्यवस्थापन संकायमा पढाइ भइरहेको छ ।
८) स्कुल स्थापनाको चरणमा कस्ता चुनौतीहरु झेल्नुपर्‍यो ?
— धेरै स्कुल भएको सानो ठाउँमा नयाँ स्कुल स्थापना गर्नु चुनौतीपूर्ण नै थियो । यहाँ धेरै जनसंख्या भएको कारणले सुरूवातमा विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई स्कुलको बारेमा बुझाउन केही कठिन भएको थियो । एसएलसी परीक्षामा विद्यार्थीहरुले राम्रो गर्न थालेपछि अभिभावकहरुको पनि मन जित्न सफल भयौँ । अहिले स्कुलमा एक हजार ७३ विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
९) विद्यार्थीहरुका लागि अतिरिक्त क्रियाकलापहरु के–के हुने गरेका छन् ?
— हाम्रो स्कुलले विद्यार्थीहरुलाई अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि गराउनुपर्ने भन्ने अवधारणा लिएको छ । विद्यार्थीलाई वादविवाद र क्विजमा मात्रै सहभागी गराउने नभई उनीहरुलाई राष्ट्रियस्तरमा नै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विभिन्न खेल तथा बौद्धिक प्रतियोगितामा सहभागी गराइँदै आइएको छ । एउटा संगठित स्कुल पनि भएको हुनाले हाम्रो स्कुलका विद्यार्थीहरुले आफ्नो समस्या पहिचान र समाधानका उपाय आफैँ पत्ता लगाएर स्कुल प्रशासनलाई जानकारी गराउँछन् । यस हिसाबले विद्यार्थीका समस्या हल गर्न स्कुल प्रशासनलाई समेत सजिलो हुने गरेको छ । यसले विद्यार्थीहरुमा व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास र नेतृत्व विकास बढाउने काम गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा राष्ट्रिय सेवा दल नामक निकाय छ, दलका विभिन्न कार्यक्रममा हामीले विद्यार्थीहरुलाई सहभागी गराइरहेका छौँ ।
सैनिक कर्मचारीहरु स्कुलमा नै आएर विद्यार्थीहरुलाई आत्मरक्षा र व्यक्तित्व विकासका तालिम पनि दिनुहुन्छ । तालिम लिएर विद्यार्थीहरुले विपद्का बेला स्वयम्सेवकको काम पनि गर्न सक्ने बनाएका छौँ । यसलाई वार्षिक कार्यक्रममा नै सहभागी गराएका छौँ । हामी अब अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्डसम्म पुग्न सक्ने गरी विद्यार्थीहरुलाई सुविधासहितको शिक्षा दिन लागिपरेका छौँ ।